Ciidamada Dalka Bilgimka Oo Soo Qabtay Qofkii Ugu Dambeeyay Ee Lagu Huhunsanaa Weerarkii Ka Dhacay Paris+Sawiro | Berberatoday.com
Ciidamada Dalka Bilgimka Oo Soo Qabtay Qofkii Ugu Dambeeyay Ee Lagu Huhunsanaa Weerarkii Ka Dhacay Paris+Sawiro
Hargeysa(Berberatoday.net/com)-Qofkii ugu dambeeyay ee lagu tuhunsanaa inuu ka qeybqaatay weerarkii lagu qaaday magaalada Paris sanadkii hore Mohamed Abrini ayaa lagu qabtay dalka Belgian sida ay sheegtay warbaahinta wadanka Belgian.
Sidoo kale Abrini ayaa loo malaynayaa inuu ahaa qof xirnaa koofi oo ka mid ahaa dadkii weeraray garoonka diyaaradaha magaalada Brussels kaasoo laga arkay shaashada CCTV.
Dambi baarayaasha dalka Belgian ayaan illaa iyo hadda si toos ah ugaga hadlin qabashada Abrini hase ahaatee waxa ay sheegeen in howlgalo la soo qabtay dad lagu tuhunsan yahay weerarkii Brusselss in la soo xirey.
Hase yeeshee saxaafada Belgian ayaa shaacisay in Abrini oo muddo shan bilood ah baxsad ahaa lagana soo qabtay degmada Anderlecht ee magaalada Brussels.
Wararka qaar ayaa sheegaya in qof kale oo la soo qabtay uu yahay qof caawinayay Kahlid el-Bakraoui oo isku qarxiyay goobta laga raaco tareenada ee Maelbeek.
Soo qabashada Abrini ayaa ka dambeysay kadib markii la shaaciyay muuqaal laga soo duubay garoonka diyaaradaha ee weerarka ismiidaaminta ah lagu qaaday.
Abrini ayaa ah 31 sano jir u dhashay dalka Belgian balse asalkiisu uu ka soo jeedo dalka Morocco. Abrini ayaa la aaminsan yahay in uu la socday Salah Abdeslam oo ah nin loo haysto weerarkii Paris labo maalmood kahor intii aan lagu qaadin weerarka magaalada Paris, waxaana duubtay CCTV oo ku xirneyd meel ay shidaal ka qaateen..